OK! Madam(2020) | MM Movie Store
သာမနျဈေးလေးထဲမှာ မုနျ့လုပျရောငျးတဲ့ မီယောငျးဟာ ကှနျပြူတာပစ်စညျးတှပွေငျတဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူ ဆော့ဟှမျ သမီးလေးဖွဈသူ နာရီတို့နဲ့အတူ နထေိုငျတယျ….တဈနမှေ့ာ ဟာဝိုငျအီကိုသှားဖို့ ကံစမျးမဲပေါကျသှားပွီး အပြျောတှလှေနျရငျး ခရီးသှားဖို့ဖွဈလာတယျပေါ့….
ဟာဝိုငျအီကိုသှားနတေဲ့လမျးခရီးဟာ တကယျပြျောစရာလို့ထငျရပမေယျ့ လယောဉျပျေါမှာ မမြှျောလငျ့တဲ့အဆုံးဝါးဆုံးပွဿနာတှဖွေဈလာတယျ….သူတို့လယောဉျပျေါမှာ အရမျးကိုအန်တရယျမြားလှတဲ့ သူလြှိုပါလာတယျဆိုတဲ့ သတငျးရလို့မွောကျကိုရီးယားတပျမှူးဖွဈသူနဲ့အဖှဲ့တှဟော လယောဉျကိုပိုကျစိပျတိုကျရှာကွတော့တယျ…
စီးနငျးလာတဲ့ခရီးသညျတှအေားလုံး ဓားစာခံဖွဈသှားကွတယျပေါ့…..မွောကျကိုရီးယားကအဖှဲ့ကလညျး တကယျ့ကိုကွမျးပရေ့မျးပဆေို့တဲ့ လကျမရှံအဖှဲ့တှေ….အဲ့ဒီနောကျတော့ လယောဉျပျေါမှာ ပွဿနာမြိုးစုံစပါတော့တယျ….
ဒီကားက ဇာတျလမျးစပွီး မိနဈ(၃၀)လောကျမှာတငျ ပှဲစကွမျးပါတယျ….လယောဉျပျေါရဲ့ နရောကဉျြးကဉျြးလေးတှမှော အကျရှငျခနျးတှကေ တကယျကိုမိုကျတဲ့အပွငျကွညျ့ရတာတှတေကယျ့ကိုရှငျးပါတယျ…
စိတျကနြေပျစရာကောငျးတဲ့အကျရှငျခနျးတှပေါတဲ့အပွငျဇာတျလမျးကတျောတျောကောငျးပွီး လြှို့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ နောကျကှယျက ထငျမထားတဲ့ အကွောငျးအရာတှနေဲ့မို့အားလုံးလကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျးပါ…သရုပျဆောငျတှကေလညျး ဒိတျဒိတျကြဲတှပေါ…
တောငျကိုရီးယားရဲ့စှယျစုံရမငျးသမီးကွီး အုမျးဂြောငျဟှာနာမညျကွီးသရုပျဆောငျ မငျးသားကွီး ဘတျဆောငျအုနျးဇာတျရုပျတိုငျးမှာပိုငျနိုငျတဲ့ မငျးသားလီဆနျယှနျးRunning Man လီဂှမျဆူရဲ့ခဈြသူမိနျးကလေး မငျးသမီးလီဆောငျဘငျး နဲ့အထူးဧညျ့သညျသရုပျဆောငျအဖွဈ မငျးသားဂငျနမျဂီတို့အပွငျ နာမညျကွီးဇာတျပို့အမြားအပွားပါဝငျအားဖွညျ့ထားကွပါတယျ…
သာမန်ဈေးလေးထဲမှာ မုန့်လုပ်ရောင်းတဲ့ မီယောင်းဟာ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေပြင်တဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဆော့ဟွမ် သမီးလေးဖြစ်သူ နာရီတို့နဲ့အတူ နေထိုင်တယ်….တစ်နေ့မှာ ဟာဝိုင်အီကိုသွားဖို့ ကံစမ်းမဲပေါက်သွားပြီး အပျော်တွေလွန်ရင်း ခရီးသွားဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့….
ဟာဝိုင်အီကိုသွားနေတဲ့လမ်းခရီးဟာ တကယ်ပျော်စရာလို့ထင်ရပေမယ့် လေယာဉ်ပေါ်မှာ မမျှော်လင့်တဲ့အဆုံးဝါးဆုံးပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်….သူတို့လေယာဉ်ပေါ်မှာ အရမ်းကိုအန္တရယ်များလှတဲ့ သူလျှိုပါလာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းရလို့မြောက်ကိုရီးယားတပ်မှူးဖြစ်သူနဲ့အဖွဲ့တွေဟာ လေယာဉ်ကိုပိုက်စိပ်တိုက်ရှာကြတော့တယ်…
စီးနင်းလာတဲ့ခရီးသည်တွေအားလုံး ဓားစာခံဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့…..မြောက်ကိုရီးယားကအဖွဲ့ကလည်း တကယ့်ကိုကြမ်းပေ့ရမ်းပေ့ဆိုတဲ့ လက်မရွှံအဖွဲ့တွေ….အဲ့ဒီနောက်တော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပြဿနာမျိုးစုံစပါတော့တယ်….
ဒီကားက ဇာတ်လမ်းစပြီး မိနစ်(၃၀)လောက်မှာတင် ပွဲစကြမ်းပါတယ်….လေယာဉ်ပေါ်ရဲ့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေမှာ အက်ရှင်ခန်းတွေက တကယ်ကိုမိုက်တဲ့အပြင်ကြည့်ရတာတွေတကယ့်ကိုရှင်းပါတယ်…
စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အက်ရှင်ခန်းတွေပါတဲ့အပြင်ဇာတ်လမ်းကတော်တော်ကောင်းပြီး လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ နောက်ကွယ်က ထင်မထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့မို့အားလုံးလက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်းပါ…သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေပါ…
တောင်ကိုရီးယားရဲ့စွယ်စုံရမင်းသမီးကြီး အုမ်းဂျောင်ဟွာနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီး ဘတ်ဆောင်အုန်းဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာပိုင်နိုင်တဲ့ မင်းသားလီဆန်ယွန်းRunning Man လီဂွမ်ဆူရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေး မင်းသမီးလီဆောင်ဘင်း နဲ့အထူးဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် မင်းသားဂင်နမ်ဂီတို့အပြင် နာမည်ကြီးဇာတ်ပို့အများအပြားပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပါတယ်…